HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo dooneysa inay Real Madrid ku garaacdo Tartanka Xidiga Kylian Mbappe
October 22, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa bartilmaameed ka dhigatay saxiixa Kylian Mbappe sida ay ku Warameyso Warbaahinta Spain..
22 jirkaan ayaa ku dhawaa inuu u dhaqaaqo Real Madrid xagaagii hore, laakiin Paris Saint-Germain ayaa diiday dalab uga yimid kooxda reer Spain.
Si kastaba ha ahaatee, Mbappe ayaa weli doonaya inuu ka tago caasimadda Faransiiska qandaraaskiisa kooxda Ligue 1 ayaana dhacaya dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Sida laga soo xigtay AS , Barca ayaa dooneysa inay ku qanciso weeraryahanka inuu u dhaqaaqo Camp Nou halkii uu ka aadi lahaa Bernabeu waxayna diyaar u yihiin inay bixiyaan mushaar ka sarreeya kuwa dhiggooda La Liga.
Warbixinta ayaa intaas ku daraysa in kasta oo PSG aysan dalban doonin lacag kala iibis ah maadaama uu dhacayo qandaraaska Mbappe, haddana hal mar ayaa weli la siin doonaa xiddiga reer France iyo wakiiladiisa.
In kasta oo ay haystaan ​​dhibaatooyin dhaqaale, Barca ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay bixiso € 90m (£ 76m), halka Real Madrid ay diyaar u tahay kaliya inay bixiso € 50m (£ 42m).